Tag: ozi ejidere | Martech Zone
Tag: ozi ejidere
Aga m ekwu eziokwu. Mgbe Steve Hashman, Director, Marketing & Ngwaahịa na Exponential Solutions na The CUBE, dere m na ihe infographic pitch banyere Na Jide Marketing, Echere m na m chuckled n'olu dara ụda na mumbled onwe m, you na-egwu egwu m?. Mana, dịka ezigbo ahịa ọ bụla, Steve mere ihe omume ụlọ akwụkwọ ya wee debe ozi infographic nke na-eme ka ohere ahụ doo anya. 70% nke ndị na-akpọ ekwentị azụmaahịa ka ejidere. 60% nke ndị ahụ ga-ekowe